Found.000 ဖြစ်နေလို့ — MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော့် memory stick ထဲက file တွေက ပျောက်ပြီး အောက်မှာပြထားသလိုပေါ်နေတယ်ဗျ ( ( ( ။ အရင် files တွေကိုပြန်လိုချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိတဲ့သူများပြောပေးကြပါ။ ကူညီကြပါနော် အဲဒီထဲ က တစ်ချိုု့ files တွေက အရမ်းရေးကြီးလို့ပါ။ :63::63::63:
အဲဒီ FOUND.000 ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ့Chkdsk လုပ်ရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးလည်း ကျွန်တော် ကြုံဖူးတယ်။ Virus ပြဿနာ နဲ့ ကိုယ်က ကိုယ့် Memory Stick အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး Chkdsk လုပ်လိုက်တာတွေကနေဖြစ်တာပါပဲ။ Hidden ထဲမှာ တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါလား။ Virus သတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
နောက်ဆုံး အဆင့် မရဘူးဆိုရင်တော့ format သာ ချပြီး recovery သာ ဆွဲလိုက်ပါတော့မယ်။ အဲဒါကမှ ပိုအဆင်ပြေနေအုံးမယ်။
Have u every tried " Recuva " software of Piriform Com: ( creator of CCleaner )?
I like it so much for recovering.
အဲဒါ lost cluster file တွေဗျ။ lost cluster ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ဖိုင်လဲဆုံးပြီပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ found.000 ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား။ FILE000.CHK ပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ open gun ပြောသလိုပဲ scandisk နဲ့ chkdsk ကြောင့်ဖြစ်ပုံရတယ်။ ခင်ဗျားပုံကလဲကြည့်လို့မရဘူး။ တစ်ခုသိချင်တာက ်FILE000.CHK, FILE002.CHK, FILE003.CHK ... အဲဒီလိုမျိုး အစဉ်လိုက်ဖြစ်နေတာလား၊ အားလုံး FILE000.CHK ပဲလား ဆိုတာပဲ။ အားလုံး FILE000.CHK တွေချည်းပဲဆိုရင်တော့ virus များလားမဆိုနိုင်ဘူး။ တစ်ခုရှိတာက အဲဒီဖိုင်တွေကို hex editor တစ်ခုခုနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပြီး၊ ခင်ဗျားအတွေ့အကြုံအရ ဒါကတော့ exe ဖိုင်(အစမှာ MZ ဆိုတာတွေ့ရင် သေချာတယ်)၊ ဒါကတော့ MP3 ဖိုင် စသည်ဖြင့် ခွဲတတ်ရင် file extension CHK ဆိုတာတွေကို သက်ဆိုင် extension ပြန်ပြောင်းပြီး run ကြည့်ကြည့်ပါလားဗျာ။
FILE000.CHK, FILE002.CHK, FILE003.CHK ... အဲဒီလိုမျိုး အစဉ်အလိုက်ဖြစ်နေတာပါ။ အမှန်က FOUND.000 Folder ထဲမှာ FILE000.CHK ကနေ ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ file အရေအတွက်အတိုင်း ထိပေါ့ ။ အဲဒါကို antivirus နဲ့ စစ်ကြည့်ရင် ဥပမာ FILE000.CHK ကိုစစ်လိုက်ရင် အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်ထည့်ထားတည့် files တွေကို စစ်နေတာမြင်ရတယ်ဗျ။ အကောင်းဆုံး အဲဒီ file တွေကိုပြန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဟင်....
That cause by virus.
AVG 7.5 free version can caught Found.000 virus.
Before u scan virus in your hardisk, u should find lost datas in memory stick.
here i upload Recovery 6.4 and try it.
serial number : ER82RE-25A44H
I handmade ГџВҐ zarni I
Pen Drive Data Recovery v2.0.1.5 full နဲ့အဆင်ပြေသွားတာပါ။
တခြားသူများ အဲလိုဖြစ်ရင်ကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ ကျွန်တော် software ကို ပြန်လည်ေ၀မျှလိုက်ပါတယ်။ :d